Dastabej » संयोग कि अन्धबिश्वास ? ‘गुरुवाको तन्त्रमन्त्रपछि राप्ती सोनारीमा रोकियो बाघको आतंक ’
संयोग कि अन्धबिश्वास ? ‘गुरुवाको तन्त्रमन्त्रपछि राप्ती सोनारीमा रोकियो बाघको आतंक ’ – Dastabej
संयोग कि अन्धबिश्वास ? ‘गुरुवाको तन्त्रमन्त्रपछि राप्ती सोनारीमा रोकियो बाघको आतंक ’
नेपालगन्ज— संयोंग मान्नुस वा गुरुवाको मन्त्रको प्रभाव । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमा मान्छे खाने बाघको आतंक नियन्त्रणका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका थारु गुरुवाले एक साताअघि बिशेष पूजा पाठ गरेका थिए । नभन्दै हाल एक सातायता त्यस क्षेत्रमा बाघको गतिबिधि देख्न छाडिएको छ । मान्छे खाएर आतंक मचाउने बाघ एक सातादेखि वेपत्ता भएको स्थानीय बताउँछन् । उक्त क्षेत्रमा बाघको पाईलासमेत देख्न छोडिएको डिभिजन वन कार्यालयलय बाँकेले जनाएको छ ।
स्थानीय गुरुवाहरुका अनुसार राप्ती सोनारीको सामुदायिक वन क्षेत्रको थारु देउता रिसाएपछि बाघको आतंक सुरु भएको थियो । उनीहरुले दैबी शक्तिको मन्त्रले बाघको आतंक नियन्त्रणमा आएको बताउँछन् ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम चौधरीले बाघको आक्रमण नियन्त्रणका लागि गुरुवाहरुले बिशेष पूजा गरेको बताए । उनले पूजापछि बाघको आतंक नियन्त्रण हुनुमा संयोज मानिएको जनाए । कसैलाई यस्ता घटनामा बिश्वास नलाग्न सक्छ । तर पूजापछि बाघ यस क्षेत्रमा देख्न छोडेको छ, उनले भने ।
बाघको शिकारका लागि सदाबहार सामुदायिक वनका दुई ठाउँमा गत मंगलबार र बुधबार ‘पाडो’ लगेर बाँधिएको थियो । तर पाडो बाँधेका ठाउँमा बाघ नआएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख ददिराम कँडेलले बताए । पाइला देखिएको स्थानमा बाघ देखा परेन ।
फत्तेपुरमा गत पुस २२ मा लीला विष्ट र २४ मा चाँदनी थारूको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । घाँस–दाउरा गर्न वनमा गएका बेला दुवैमाथि बाघले आक्रमण गरेको थियो । बाघको आक्रमणबाट स्थानीयको मृत्यु भएपछि निकुञ्ज र सामुदायिक वन आसपासमा त्रास छ । पछिल्लो तीन महिनामा चार जनाको मृत्यु भएपछि बाघ नियन्त्रणमा लिन चितवनको सौराहाबाट प्रकृति संरक्षण कोषको प्राविधिक टोली यहाँ आएको छ । एक साता पुगे पनि प्राविधिकको टोलीले बाघको चाल खबर पाएको छैन ।
६ माघ २०७८, बिहीबार १७:१२ प्रकाशित